Hurukuro Pakati peHurumende neVashandi Vayo Dzoshaya Pundutso.
Ndira 15, 2014
WASHINGTON — Hurukuro dzakaitwa neChitatu pakati pevamiriri vevashandi vehurumende, pamwe nehurumende pachayo, dzatadza kubuda nechimuko zvichitevera kupesana kwaita vari munhaurirano dzemihoro idzi.
Zvinonzi hurumende yati yakazvipira kuwedzera mari yemushandi anotambira iri pasi pasi kuti ive mazana matatu nemakumi manomwe nemadhora mashanu pamwedzi, kubva pamazana maviri nemakumi mapfumbamwe ane madhora matanhatu.
Asi izvi zvinonzi zvarambwa nevamiriri vevashandi avo vati vanoda kuti mari idzi dzitangire pamazana mashanu nemakumi mana emadhora pamwedzi zvichienderana nePoverty Datum Line.
Zvinonzi nhaurirano idzi dzichaitwa zvakare nemusi weChishanu.
Iyo nyaya yePoverty Datum Line iri kunetsawo pakuti hurumende inonzi iri kuti yayo yainoziva iri pamazana mashanu, ukuwo vashandi vachiti zvinozivikanwa nemunhu wose kuti iri kupfuura madhora mazana mashanu nemakumi mana.
Vachitaura pachirongwa cheStudio 7 cheLivetalk, munyori mukuru wesangano revarairidzi reProgress Teachers Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, uye mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association, VaSifiso Ndlovu, vakatenda kuti hurukuro hadzina kufamba zvakanaka.
Hatina kukwanisa kubata vatungamiri vehurumende muhurukuro idzi kanawo gurukota revashandi, VaNichoals Goche, sezvo vose vange vasingadairi nhare mbozha dzavo.
Zvichakadaro, nyaya yekuwedzera mari yevashandi vehurumemende pasina kubviswa vamwe vari kunzi vari kungobhadharwa nehurumende vaisiri pamabasa, inonzi ichaitawo kuti hukama hweZimbabwe ne International Monetary Fund, IMF, husamire zvakanaka.
Pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program hurumende yakatenderana neIMF kuti yaizodzikisa mari dzemihoro yevashandi vehurumende dziri kunzi dzakawandisa.
IMF yakapa Zimbabwe kusvika muna Chikumi kuti inge yazadzikisa zvibvumirano neIMF zvichapa kuti hupfumi husaende kumawere.
IMF neWorld Bank hadzisi kupa Zimbabwe mari yechikwereti nenyaya yekusabhadhara zvikwereti kuri kuitwa neZimbabwe.
Mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaGodfrey Kanyenze, vanoti zvakanaka kuti Zimbabwe idyidzane neIMF asi vati kuzadzikisa zviga zvebhanga iri zvichanetsa.